एभरेष्ट बैंकले यसै बर्ष ७० देखि १००% वोनस सेयर दिने | ictkhabar
Feb Tue 2020 05:40:32
पूँजी बजार फेरि ओर्लियो, एभरेष्ट बै‌ककै नौ करोडको सेयर किनबेच हुँदा पनि कारोबार रकम घट्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले आफ्नो पूँजी बृद्धिका योजना सार्वजनिक गरेपनि सेयर बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव देखिएन । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि बजारमा निकै अन्यौंल देखिँदा नेप्से परिसूचकमा असर परेको हो ।
एभरेष्ट बैंकले २०२ करोड बराबरको बोनस सेयर दिने आफ्नो पूँजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेपछि लगानीकर्ताको ध्यान पनि यही बैंकमा केन्द्रित देखिएको छ । साताको अन्तिम कारोबार हुने दिन विहीबार एभरेष्ट बैंकको करिब नौं करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो ।
एउटै बैंकको यति धेरै मूल्यको सेयर किनबेच हुँदा पनि कारोबार रकममा भने सुधार देखिएन । दिनभरमा नेप्से २.५४ अंकले घट्यो भने कारोबार रकम पनि १५ करोड रुपैयाँले घट्यो । एभरेष्टले सतप्रतिसत बोनस सेयर दिने योजना सार्वजनिक गर्दा पनि बजार भने प्रतिकित्ता १० रुपैयाँले मात्रै बढ्यो । यो बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३३ सय रुपैयाँमा कारोबार भयो ।
एभरेष्ट बाहेक लक्ष्मी र कुमारी बैंकको मात्रै सेयर मुल्य बढ्यो । अन्य बाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले भने विहीबार गुमाएका छन् । त्यस्तै अधिकांस इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य पनि घट्यो ।
दिनभरमा ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । यस मध्ये २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बाणिज्य बैंक समूहको कारोबार भएको छ । विकास बैंक समूहको पाँच करोड रुपैयाँको, फाइनान्सको चार करोड ९६ लाखको र इन्स्योरेन्सको तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
एभरेष्ट बैंकले तीन अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वोनस सेयर दिने, यसै बर्ष ७० देखि १००% सम्भावना
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले कति प्रतिशत वोनस सेयर देला ? सर्वसाधारण लगानीकर्तामा मच्चिएको कौतुहलता हो यो । बैंकको सेयर मूल्य अहिले वोनस सेयरसँग जोडिएको सुचनाका आधारमा तलमाथि भइरहेको छ । थोरै वोनस र धेरै नगद लाभांस वितरण गर्दै आएको एभरेष्ट बैंकका लगानीकर्ताहरु यसपाली भने पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने निर्देशनका कारण वोनस सेयर वढी आउने अपेक्षामा छन् ।
पोहोर पनि आकर्षक वोनस सेयरको आशा गरेका लगानीकर्तालाई एभरेष्टको सञ्चालक समितिले निरास पार्दै नगद लाभांसको मात्रा वढाएको थियो । यसपाली बजारमा ४० प्रतिशतसम्म वोनस सेयर दिने हल्ला चलिरहेको छ । आखिर के हो त वास्तविकता ? एभरेष्ट बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रहेको रकममध्ये तीन अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँको वोनस सेयर वितरण गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यो प्रत्येक बर्ष हुने नाफा वाहेकको रकम हो । अहिले एभरेष्ट बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब एक करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । बैंकको साधारण जगेडा कोषमा चार अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये बैंकले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वाँड्न मिल्ने रकम हो ।
‘बैंकले फ्रिरिजर्भमा रहेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ वोनस सेयर वाँड्ने जानकारी हामीलाई गराएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बैंकले एउटा दुई अर्बको बैंकसँग मर्ज गर्ने, साढे तीन अर्बको वोनस सेयर जारी गर्ने र ४५ करोडको एफपिओ जारी गरेर चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउने जानकारी दिएको छ ।’बैंकले तीन अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुन अनुपातमा वितरण गर्छ त ? बैंकसँग चालु र अर्को आर्थिक बर्ष गरेर वोनस सेयर वितरण गर्ने छ । बैंकले जगेडा कोषबाट १७६ प्रतिशत वोनस सेयर दिने छ । यसलाई दुई आर्थिक बर्षमा वाँड्दा बैंकले यसै बर्ष ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म वोनस सेयर दिन सक्छ ।एभरेष्टले हरेक बर्षको नाफाबाट पनि लाभांस वितरण गर्न सक्छ । विगतको प्रबृत्ति हेर्दा बैंकले नाफाबाट नगद लाभांस वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । उसले वोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने करको रकम नाफाबाट वितरण गर्नेछ ।
एभरेष्टको पुँजी बृद्धि योजनाले बैंकको आठ करोडको सेयर किनबेच, सेयर बजार १२ अंकले उक्लियो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले दुई आर्थिक बर्षमा तीन अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात १७६ प्रतिशत वोनस सेयर दिने गरी पुँजी योजना पेश गरेपछि सेयर बजारमा उछाल आएको छ । बैंकको सेयर एकै दिन प्रति कित्ता २१० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन ३१८० रुपैयाँमा बन्द भएको एभरेष्टको सेयर बुधबार ३२९० रुपैयाँ प्रति कित्ता पुगेको छ । मूल्य बृद्धिसँगै बैंकको सेयर सबैभन्दा वढी कारोबार भएको छ । एभरेष्टको आठ करोड १६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको हो । सानिमा बैंकको पनि सात करोड २९ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । एभरेष्ट, सानिमासँगै ग्लोबल आइएमइ, एनआइसी एसिया, बैंक अफ काठमाण्डूलगायतको सेयर कारोबारमा तिब्रता आएपछि बजारमा बुधबार ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजार १२ अंक उक्लिँदै ११८१ अंक पुगेको छ । दिनभरीमा १२७ कम्पनीका नौं लाख २७ हजार १४९ कित्ता सेयर कारोबार भएका छन् । बुधबार बिमा २८, होटल २६, बैंक १५, जलविद्युत १३, अन्य साढे दुई, विकास बैंक १० अंकले बढेको छ । हाथवे समूहले खरीद गरिरहेको अरुण फाइनान्सको सेयर करिव १०प्रतिशतले बढेर प्रति कित्ता ११५ रुपैयाँ पुगेको छ । युनियन फाइनान्सको सेयर मूल्य पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेकोे छ । कमाउनेमा काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट, नेको इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट बैंकका लगानीकर्ता छन् । गुमाउनेमा यति विकास, कैलास विकास, रिडी हाइड्रो, कालिका माइक्रो क्रेडिटका लगानीकर्ता छन् ।